विद्युतकर्मी साहित्यिक समाजको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न, नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे विद्युतकर्मी साहित्यिक समाजले स्रस्टा सम्मान, कृति विमोचन तथा रचना वाचनको कार्यक्रमसहित आफ्नो सातौँ अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । आइतबार प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवालीको प्रमुख आतिथ्यतामा
पत्रकार सम्मेलनमा जी–बबको प्रष्टीकरण : ‘पारिवारिक बन्देज स्वीकार्य हुदैन’
तस्वीर : महेश्वर के.सी., काठमाडौं । पछिल्लो समय ¥यापर जी–बब उर्फ सुदीप भण्डारी र उनका आमाबुबाले एक–अर्काविरुद्ध दिएका उजुरीको निकै चर्चा छ । सोही विवादलाई लिएर जी–बबले पहिलो पटक पत्रकार
ओएसआर मुभिजमा ‘मालामाल’ (भिडियो)
काठमाडौं । कमेडी सिरियल ‘मालामाल’ अब दर्शकहरुले हेर्न पाउने भएका छन् । ओयसआर डिजिटलको प्रस्तुति रहेको उक्त सिरियलको नियमित प्रसारण ओएसआर मुभिजमा हरेक शुक्रबार राति ८ बजे हुनेछ । सामाजिक
फिल्म ‘डलर एयूडी’ निर्माण हुने, मुख्य भूमिकामा मेनुका र अर्पण
काठमाडौं । फिल्म ‘डलर एयूडी’ निर्माण हुने भएको छ । बिहीबार साँझ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच फिल्म निर्माणको घोषणा गरिएको हो । लामो समयदेखि नेपालको मौलिकतालाई जोगाउन विविध मनोरजानात्मक कार्यक्रमको
दुई सातामै दया, सौगात र मिरुना स्टारर् ‘कबड्डी–४’ले कमायो १८ करोड ७८ लाख!
काठमाडौं । अभिनेता दयाहाङ राई, सौगात मल्ल र मिरुना मगर स्टारर् ‘कबड्डी–४’ले बक्स अफिसमा राम्रो कलेक्शन गरिरहेको छ । यो फिल्मले दुई सातामै १८ करोड ७८ लाख बढीको कलेक्शन गरेको
काठमाडौं । सुनिल गिरीको ‘सोल्टिनी क्या राम्री’ ट्रेण्डिगंको दुई नम्बरमा उक्लिएको छ । शुक्रबार रिलिज गरिएको गीतको भिडियो यो समाचार तयार पार्दासम्म करिब ६ लाखले हेरेका छन् । गायक गिरीकै
इजरायल । विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ (विनेसाम)को केन्द्रीय समितिले बेलायतमा बसोबासरत सक्रिय पत्रकार तथा साहित्यकार अमित थेबेलाई उत्कृष्ट सदस्य घोषणा गरेको छ । महासंघका सदस्यहरुको साहित्यिक सक्रियताको आधारमा उनलाई सक्रिय
काठमाडौं । वरिष्ठ अभिनेता सरोज खनालको निर्देशनमा फिल्म ‘बगान’ निर्माण हुने भएको छ । वरिष्ठ अभिनेता खनालको निर्देशनमा बन्न लागेको पहिलो फिल्मको नाम आइतबार एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरिएको हो
सन्तोष सेनको ‘प्रेमगीत ३’ भारतमा ‘विश्वजितम्’ नामबाट रिलिज गरिने
काठमाडौं । निर्माता÷निर्देशक सन्तोष सेनको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेमगीत–३’ छिमेकी राष्ट्र भारतमा ‘विश्वजितम्’ नामबाट रिलिज हुने भएको छ । निर्देशक सेनले ‘प्रेमगीत–३’ भारतमा ‘विश्वजितम्’ नामबाट रिलिज हुने जानकारी गराएका हुन् ।
काठमाडौं । गजलकार एवं लेखक यात्रीप्रकाश पाण्डेको पहिलो उपन्यास ‘सइन’ माथि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा शनिबार आयोजित अन्तर्क्रियामा ‘सइन’ उपन्यासमाथि छलफल गरिएको हो ।
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले चलचित्र ‘सर्वजित’ निर्माणका लागि आफ्नो पाँच महिनाको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित एक कार्यक्रमबीच
काठमाडौं । अभिनेता दयाहाङ राई, मिरुना मगर र सौगात मल्ल स्टारर् ‘कबड्डी–४ः द फाइनल म्याच’ले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कमाइ गरिरहेको छ । फिल्मका वितरकका अनुसार ‘कबड्डी–४’ले एक सातामा नै १५
१०० करोडको घर र ७ करोडको भ्यानिटी भ्यान भएका ‘पुष्पा’को कति छ नेटवर्थ ?
काठमाडौं । ‘पुष्पा’ फिल्मको अपार सफलतापछि साउथका चर्चित सुपरस्टार अल्लु अर्जुनको फ्यान फलोइङ ह्वात्तै बढेका छन् । फिल्म ‘पुष्पाः द राइज’ रिलिज भएपछि अल्लु अर्जुनको लोकप्रियता दक्षिण भारतमा मात्रै नभई
पल शाह प्रकरण : जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतद्वारा सदर, अभिनेता थुनामै रहने
काठमाडौं । उच्च अदालत पोखराले जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका मोडल एवं अभिनेता पल शाहलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने तनहुँ र पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको छ । विहीबार
काठमाडौं । मोडल एवं अभिनेता पल शाहविरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्धामा उच्च अदालत पोखरामा बहस सकिएको छ । जिल्ला अदालतले अभिनेता शाहलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि शाह पक्षधरले बाहिर